Taariikh Nololeedkii Faaduma Qaasim Hilowle !! – IFIYE
MadashaQof ka hadalQormooyinXulalkaXulka
7-dii October sannadkii 1949-kii ayeey ku dhalatay degmada Boondheere ee gobolka Banaadir; Fanka ayeey kusoo biirtay iyadoo caruur ah, waxaana dhallay waddani wayn AUN oo kamid ahaa horseedkii ururkii SYL, waana Qaasim Hilowle oo lagu naaneysi jiray Qaasim “Iskiifo”.
Aqalkaas fanka iyo waddaniyadda leh ayeey ku dhex barbaartay Faaduma Qaasim, ilaa ugu dambeyntii ay noqotay xiddig fanka dhex degay! golihii murtida iyo maaweellada ee Muqdisho.Faaduma iyo hoballadii kale ee Waaberi waxa ay gaarsiiyeen fanka Soomaaliyeed heer caalamka laga jeclaado, oo magaca Soomaaliyana meel sare gaaro.
Bandhigyadii la qabtay (Cultural Festivals) ee goobo kala duwan oo caalamka ah lagu qabtay waxa ay keentay in Faaduma Qaasim ay door wanaagsan ka qaadato, waxaana la xasuustaa in ay ku luuqeysay heeso badan oo iskugu jira luuqado kala geddisan, waxaana la sheegaa In ay ku heestay ku dhowaad 9-luuqadood oo ay ugu door roon yihiin, Taliyaaniga, Ruushka, Shiinnaha, Kuurriya, Jarmal, English, Carabi, Sawaaxili iyo Soomaali.
Intii lagu guda jiray xilligii dagaallada sokeeye, qaxa, iyo bur burka AUN Faaduma Qaasim waxa ay ahayd astaan aan liicin oo dhanka nabadda iyo dhiirro gelinta is jeceylka bulshada Soomaaliyeed, waxaana ay adeegsaneysay codkeeda dahabiga ahaa, kaas oo cid walba ay u riyaaqsaneyd.
Waxa ay ku jirtay fanaanniin badan oo Soomaali ah kuwaas oo dalka iskaga baxay, deegaanna ku noqday waddamada reer Galbeedka, Faaduma Qaasim waxa ay degtay dalka UK, halkaas oo ay ka bilowday wacyi gelinta bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqneyd UK.
Waxyaabaha lagu xasuusan doono waxaa kamid ah heesaha Xamariga, heesaha luuqadaha qalaad lagu qaado, kasoo muuqashada riwaayadaha kala geddisan ee Banaadiriga iyo kuwa kale ee caadiga ah, intaas waxaa dheer in ay ahayd qof samo ka talisa ah, waxaana lagu xasuusan doonaa doorkii ay ka qaadatay dib u heshiisiinta Soomaalida, iyo shirarkii waa waynaa ee lagu heshiisiinayay.
Ugu dambeyn geeddi nololeedkii fanaannad Faaduma Qaasim Hilowle ayaa soo gaba gaboobay oo 6-dii October sannadkii 2011-kii ayeey ku geeriyootay magaalada London ee xarunta dalka UK; galabnimo Sabti ah taariikhdu ku beegan tahay 8-da October 2011-kii faynuustii fanka oo meydkeeda ay galbinayaan muslimiin Soomaali u badan ayaa lagu aasay qubuurraha “Garden Of Peace”ee magaalada London.
Naaneysta Feynuusta Fanka ayeey caanku ahayd allaha u Naxariistee fanaannad Faaduma Qaasim Hilowle, waxaana rabbi kaga baryeynaa in uu u naxariisto qabrigeedana u nuurriyo halyeeyaddaas fanka caanka ku ahayd.
Buugga:- Xusuusta Kuwii Xabaal Galay ee ay sida wada jirka ah u qoreen Abdulkadir Shire Farah iyo Khalid Macoow Abdulkadir gaar ahaan bogga190-93
Baalkii Madoobaa Ee Nolosha Oprah Winfrey (Qormo Xiiso Badan)